Ndụmọdụ iji jikwaa Ecommerce na netwọkụ mmekọrịta | ECommerce ozi ọma
Youtụleela mgbe ị na-ere ma ọ bụ na-azụ ihe n'ịntanetị? Ọ bụrụ otu a, ikekwe ị nụla banyere ụlọ ahịa dị n'ịntanetị dịka Amazon, ma ọ bụ eBay. Ma eleghị anya, ịchọrọ ịmepụta saịtị Ecommerce gị, mana ịnweghị oge iji kwado nnukwu azụmahịa a; Better ka mma iji netwọkụ mmekọrịta gị! Taa, anyị na-enye gị ụfọdụ Atụmatụ maka ijigide saịtị ahịa site na saịtị dịka Facebook ma ọ bụ Twitter.
2 Jide asọmpi
4 Jiri mmemme ndị ama ama baara gị uru
Ndị mmadụ kwesịrị ịma ihe dị ọhụrụ; Ma ị na-ere ngwaahịa ọhụụ, nwee onyinye ọhụrụ, ma ọ bụ nyocha nke ngwaahịa ọhụrụ kụrụ n’ahịa. Cheta na obughi ihe niile n’acho ahia gi bu mgbasa ozi, i nwekwara ike nyere ụmụazụ gị aka ime ka ha mara banyere peeji ahia ndi ozo nwere ike imasi ha.
Kpukpru nnyịn imama enọ; hazie obere asọmpi nke ndị na-eso ụzọ gị nwere ike imeri ngwaahịa ma ọ bụ nweta onyinye pụrụ iche. Nke a ga - enyere ndị ọrụ gị aka inwekwu mmasị na azụmahịa gị ma ị nwere ike nweta ụmụazụ ọhụrụ. Nwere ike iji ohere a tufuo ngwaahịa ndị ị na-adịkwaghị mkpa, ebe ị na-eme ka saịtị gị mara. Nnụnụ abụọ nwere otu nkume.
Otu n'ime nnukwu uru nke na-agba ọsọ ahịa ahịa Site na netwọkụ mmekọrịta gị na inwere ike ịmekọrịta ndị ọrụ gị na ndị ọrụ anyị; Jụọ ajụjụ mgbe niile banyere ụzọ ị na-esi azụ ahịa. Kedu ụzọ ka mma iji kwalite azụmahịa gị? Ugbu a ị marala ihe ụmụazụ gị na-ahọrọ, ọ ga-adọta ha karịa ma ọ bụrụ na ha amata na a na-anụ ha.
Jiri mmemme ndị ama ama baara gị uru
Ka e were ya na ha mechara wepụta fim ahụ mara oke mma nke anyị niile na-eche ma ugbu a ọ dị mma; ị pụrụ iji ohere dị ka nke a mee ihe akwalite ngwaahịa ndị metụtara ya na ihe omume. Bụrụ uwe, ihe egwuregwu ma ọ bụ ihe ọ bụla metụtara ihe ejiji, onye ọ bụla ga-achọ ịzụta ihe ma ị ga-abụ onye ziri ezi ịre ya.
Na-echeta mgbe niile na azụmaahịa ịntanetị chọrọ ndidi. Obere obere ị ga - enweta ọtụtụ ndị ahịa na - eguzosi ike n’ihe ma mepụta obodo gị nke ndị ahịa Internetntanetị. Enwere m olileanya na ndụmọdụ ndị a ga-enyere gị aka ma cheta na ihe ịga nke ọma dị na nnọgidesi ike. Kechioma!
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » CMS na Teknụzụ » Nkuzi na akuru » Ndụmọdụ maka ijikwa Ecommerce na netwọkụ mmekọrịta
Ndewo, ekele Susana María!
Enwere m ajụjụ, ọ ga-adị mma mgbe niile ịnwe ngwaahịa na ngwaahịa ndị a? Ma ọ bụ n'ikpeazụ ma ọ bụ mgbe ụfọdụ.
Acumbamail, ahia email kacha mma diri onye obula